Tontolon'ny sarimihetsika :: Feno lesoka ny fampanarahan-dalàna ny politika nasionalin’ny sinema malagasy • AoRaha
Tontolon’ny sarimihetsika Feno lesoka ny fampanarahan-dalàna ny politika nasionalin’ny sinema malagasy
Tsy mbola nody ventiny ny rano nan­tsakaina ho an’ireo mpisehatra amin’ny tontolon’ny sarimihetsika, amin’izao fotoana izao. Valo volana taorian’ny fanafoanana ilay lalàna laharana 2017-011 mahakasika ny politika nasionalin`ny sinema sy ny sary ahetsika sy fandravana ny Ofisy malagasy misahana ny sarimihetsika (Omaci), dia tsy mbola tafatsangana ny rafitra vaovao sy ny volavolan-dalàna hifehezana io sehatra io.
“Tao anatin’ny hamehana no nanafoanan’ny minisite­ran’ny Kolontsaina io lalàna io, kanefa mihisatra ry zareo amin’ny fanomezana vahao­lana. Misehatra ao anatin’ny gaboraraka ny mpikirakira sarimihetsika, ankehitriny, noho ny tsy fisian’ny lalàna mifehy io sehatra io. Vokany, betsaka ny lafin-javatra ahitana lesoka manodidina fampanarahan-dalàna ny tontolon’ ny sarimihetsika, toy ny hetra, ny fiarovana ny sanganasan’ ny mpanatontosa sy ny ady amin’ny hosoka ary ny fivaro­tana ny vokatra”, hoy i Johasy Eléonore, solombavam-bahoaka anisan’ny mandroso tolo-dalàna vaovao hifehe­zana ny sinema.
Tsiahivina fa nankatoavin’ ny Fitsarana avo momba ny Lalàm-panorenana ny fanafo­a­nana ny lalàna narafitry ny Omaci, tamin’ny volana jolay lasa teo. Voarakitra tao anatin’ ny fanapahan-kevitra noraisin’ ity rafitra ambony momba ny lalàna ity ihany koa ny fane­rena ny minisiteran’ny Kolon­tsaina am-perinasa handra­fitra lalàna vaovao faran’izay haingana.
“Efa nisy asam-baomiera nataonay. Tapaka nandritra izany fa hatsangana aloha ny ivon-toeran’ny sarimihetsika sy ny sarimiaina malagasy (ISSM), izay hiandraikitra ny fitantanana ny sarimihetsika vao hirosoana ny fandrafetana ny lalàna vaovao hifehe­zana io tontolo io. Tsy ho ela izy io dia hitsangana”, hoy Razafiarison Francis, tale jene­raly misahana ny kolontsaina.
Nasiany tsindrim-peo fa tsy maintsy amin’ny alalan’ny didim-panjakana no hananganana sampandraharaham-panjakana hitantana ny sari­mihetsika, araka ny voalaza ao anatin’ny lalàna laharana faha-2018-037, mikasika ny foto-kevitra mifehy ny orinasam-panjakana na sampandraharaham-panjakana.
Hala-jaza Votsotra ilay ankizy varira
Fanovana lalam-panorenana :: Miresaka momba ny vinavinan’ny fitsapan-kevi-bahoaka ny minisitry ny Serasera
Baolina kitra – “CAF Awards 2019” :: Hiady ny famaranana i Nicolas Dupuis, voailika i Carolus